Yan Aung: ကိုးရီးယားလူမျိုးများအတွက် ကြေကွဲဖွယ်ရာနေ့တစ်နေ့
တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ..။ ယဉ်ကျေးလှပါပြီဆိုတဲ့ ခုခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ပျောက်ကွယ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်..။
You know.. S.Korean Govt told them not to go to Afgan. The Govt opposed the idea. And some more they were supposed to be volunteers but they were some what doing missionary in uptight Islam area. They shouldn't have dig their own graves.
သူဟာ ဒီနေရာမှာ သေဖို့ကံပါလာလို့ ဘဲလေ လို့ ဖြေရတော့မှာပေါ့
တကယ်တော့ ဘယ်အရာမှ အစွန်းရောက်တာ မကောင်းပါဘူးကွယ်။ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် လုပ်လိုက်တာ။ သူတို့ ဆီကို သာသနာလာပြုသူတွေလဲ မလာရဲအောင်။ သူတို့ဆီက အဖမ်းခံရသူတွေလည်း ပြန်လွတ်အောင်လေ။ အစွန်းရောက် တရားတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးပဲ။ ဓါးစာခံတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးကြရအောင်နော်။ တကယ့်ကို စိတ်ထိခိုက်ဘွယ် သတင်းတခုပါပဲ။